चीन सेतो क्वार्ट्ज पानी प्रवाह प्राकृतिक स्ट्याक्ड स्टोन प्यानल कारखाना र निर्माता DFL
सेतो क्वार्ट्ज पानी प्रवाह प्राकृतिक स्ट्याक्ड स्टोन प्यानल
सतह उपचार: मेशिन-कट
खरानी क्वार्ट्ज पानी प्रवाह प्राकृतिक ढुone्गा फलकing सही छन् फोहोराहरू र बनावट र रंगको एक समृद्धि छ कि कुनै पनि भित्री वा बाह्य बस्ने ठाँउमा कालातीत लालित्य को भावना थप गर्दछ।
स्थायित्व र बहुमुखी प्रतिभाको ग्यारेन्टी, प्राकृतिक पत्थर उत्पादनहरू स्थायी शैलीको एकीकृत लुक बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
DFLstone ढुone्गा प्यानल निम्न सुविधाहरूको पालना गर्नुहोस्:
आदर्श क्वार्ट्ज प्राकृतिक स्ट्याक्ड स्टोन निर्माता र आपूर्तिकर्ता खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईंसँग सिर्जनशील हुन मद्दतको लागि हामीसँग ठूलो मूल्यहरूमा विस्तृत चयन छ। सबै पानी प्रवाह क्वार्ट्ज स्टोन प्यानल गुणवत्ता ग्यारेन्टी छन्। हामी सेतो क्वार्ट्ज स्ट्याक्ड स्टोन प्यानलको चीन मूल फ्याक्ट्री हो। यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
लाभ: १, १ the वर्ष ढु the्गा निर्यात व्यवसाय को लागी अनुभव .हम- DFL स्टोन कम्पनीले २०० 2004 मा निर्माण गर्छौं र प्राकृतिक ढु stone्गामा उर्जा केन्द्रित गर्दछौं .अनि हाम्रो कम्पनी प्रणाली स्वस्थ छ।
हामी आईएसओ 9001: २०१1 कम्पनी हो
२, पूर्ण दायरा उत्पादन गर्दछ र तपाईं हामी सँगै खरीद गर्न सक्नुहुन्छ: मोजेक, फ्ल्यागस्टोन चटाई, स्तम्भ टोपी, सिल्स, र ढु pe्गा ढु stones्गा आदि।
,, कागजात फाइदा
उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाका ग्राहकहरूका लागि हामीसँग बढि फाइदा छ। हामी पूर्ण कागजातहरू सजिलैसँग आयात गर्न मद्दत गर्न सक्छौं। L / C वा अन्य भुक्तानी सर्तहरू वा व्यापार सर्तहरूको लागि, हामीसँग पूरा अनुभव छ।
आदर्श बरफ ग्रे क्वार्ट्ज स्टोन प्यानल निर्माता र आपूर्तिकर्ता खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईंसँग सिर्जनशील हुन मद्दतको लागि हामीसँग ठूलो मूल्यहरूमा विस्तृत चयन छ। सबै ग्रे स्टोन प्यानल गुणवत्ता ग्यारेन्टी छन्। हामी नियमित शैली सीमेंट स्टोन प्यानलको चीन मूल फ्याक्ट्री हो। यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
आइस ग्रे इन्टर्लॉक फ्ल्यागस्टोन प्यानल
.5०..5 × .5०.cm सेमि कालो प्राकृतिक ढुone्गाको ढुb्गा मोजेक टी ...
30.5 × 30.5 सेमी लोकप्रिय Hone प्राकृतिक पत्थर मोज़ेक ...
तातो बिक्री रस्ट बाहिरी सजावट वास्तविक पत्थर प्यानेलिंग